Home/समाचार/कोठामा श्रीकृष्णको तस्विर सजाउन दिनेसँग मात्रै विवाह गर्छुः श्वेता खड्का
अभिनेत्री श्वेता खड्काले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको ‘कहाँ भेटिएला’बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरिन् । श्रीकृष्णकै अर्को फिल्म ‘कोहिनुर’ खेलेपछि उनीहरूले बिहे गरे । तर, विवाहको एक महिनामा नै श्रीकृष्णको निधन भयो ।त्यसपछि विक्षिप्त बनेकी श्वेता अहिले नयाँ जीवन बाँचिरहेकी छिन् । उनी ‘श्वेता श्री फाउन्डेसन’मार्फत माझी बस्ती निर्माण पनि गरिरहेकी छिन् । श्वेतासँग उनको अबको जीवनबारे नयाँ पत्रिकाका नवीन प्यासीले सोधखोज गरेका छन्ः–तपाईंसँग अझै लामो जीवन बाँकी छ । अबको यात्रा कसरी गर्नुहुन्छ ?म आजका लागि बाँच्छु । आज जसरी पनि खुसी हुने प्रयत्न गर्छु । भोलि के हुन्छ, सोच्दै सोच्दिनँ । अरूले के भन्छ, सोच्छ पनि ख्याल गर्दिनँ । उहाँ (श्रीकृष्ण श्रेष्ठ)ले मलाई यसरी अधुरो बाटोमा छाडेर जानुहुन्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ ? श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह हुन्छ भनेर पनि थाहा थिएन नि । एक महिनामा फिक्स भएर विवाह भयो । इन्टरकास्ट, उमेरको ग्यापलगायत हरेक कुराले हाम्रो विवाह नहुनुपथ्र्यो । तर, भयो । भोलिको कुरा कसलाई के थाहा ?हिजोको जीवन त सकियो । अबको दिनमा त नयाँ सपना र सोच चाहियो नि, होइन ?
पहिलाको श्वेता त उहाँले छाडेर गएको दिन नै जलेर मरिसकी । म अर्को श्वेता जन्मेकी हो । अहिले नयाँ जे पनि सोच्न सक्छु । मेरो जीवनमा जे पनि हुन सक्छ । पहिलाको जिन्दगीको त्यो गाडी, त्यो लुकिङ मिरर हेर्न छाडिसकेँ, जुन बाटोमा मेरा पछाडिका घटना देखिन्छन् । त्यही भएर म फ्रेस श्वेता हो । मैले फिल्म पनि बनाएँ र दर्शकको मन जितेँ । बस्ती पनि बनाउँदै छु । जे गर्दै छु, नयाँ गर्दै छु ।यदि भोलि विवाह भइहाल्यो भने श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई बिर्सनुहुन्छ ?यदि मेरो विवाह भइहाल्यो भने उहाँलाई राख्ने स्पेस सिर्जना गर्न नसक्नेसँग हुँदैन । मेरो नयाँ घरमा पनि उहाँको तस्बिर राख्न पाउनुपर्छ । उहाँको जन्मदिन हरेक वर्ष सेलिब्रेट गर्न छुट दिने मान्छे आए विवाह गर्छु । उहाँ मेरो विगत हो । मेरो विगतलाई स्वीकार गर्न नसक्ने मान्छेसँग विवाह हुँदैन । मेरो प्रत्येक पलमा उहाँबारे बोल्दा तारिफ गर्ने मान्छेसँग हुनुपर्छ । धनले, रूपले मलाई अर्थ राख्दैन । मन राम्रो भएको मान्छेसँग अवश्य जोडिन सक्छु । -नयाँ
पत्रिकाबाटयो पनि,म मेरो वर्तमानमा बाँचिरहेकी छु: स्वेता खड्काअभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि उनकी श्रीमती अभिनेत्री स्वेता खड्काको अवस्था देख्दा धेरैलाई लागेको थियो, उनलाई सामान्य जीवनमा फर्किन अब गाह्रो होला । अचेल स्वेताको मुहारमा छाउने मुस्कानले देखाउँछ, उनको जीवनमा हराएको खुसी फेरि फर्किसक्यो । श्रीकृष्णको निधन भएको दुई वर्षपछि ‘कान्छी’ फिल्म बनाइन्, आफैँ अभिनय गरिन् । रेस्टुराँ, इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लगायत विभिन्न व्यवसायमा पनि हात हालेकै छिन् । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा माझी बस्ती निर्माण अभियानमा पनि जुटेकै छिन् । अहिले बाँचिरहेको जीवन उनलाई ‘दोस्रो जीवन’ जस्तो लाग्छ रे ! उनको पहिलो र दोस्रो जीवन केन्द्रित भएर अनिल यादवले गरिएको अन्तरंग कुराकानीःनिकै हतारमा देखिनुहुन्छ नि ?अँ, एकदमै बिजी छु । चारैतिर हात हालेको छु । फिल्मको विदेश प्रदर्शन, माझी बस्तीको पुनःनिर्माण, आफ्नो रेस्टुरेन्ट, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी थुप्रैतिर आबद्ध छु । फेरि अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष पनि लाग्दैछ । त्यसैले क्लोजिङको टाइम छ । अहिले पनि यो इन्टरभ्यू सकिनेबित्तिकै बैंक जानुपर्ने छ ।
विप्लव को बन्द गाडीमा आगजनी..